Iyo Apple Watch Series 3 zvakare ine zviziviso zvayo zveKisimusi | Ndinobva mac
Apple yeKisimusi mushandirapamwe yakatanga mazuva mashoma apfuura. Iyo kutanga kushambadzira yakapihwa nevaya vari muCupertino yakanangana neiyo iPhone X, Apple Music uye yayo inozivikanwa isina waya mahedhifoni, iyo AirPods. Nekudaro, kune rimwe zvikwata zvake izvo zvinogona kuve imwe yenyeredzi dzemapati eKisimusi ari kuuya: iyo Nhepfenyuro dzeApple 3.
Kuti ikurudzire kutengwa kwayo, Apple yakafunga kuburitsa, kwete imwechete kana maviri, asi kusvika kumashambadziro mana akatarisana nezvimiro zve smartwatch mune yayo yazvino vhezheni. Rangarira izvo kuSpain haisati yatengeswa neinternet connection, chinhu chayo chikuru uye chikonzero chikuru chekuvandudzwa mune ino vhezheni vhezheni; Apple haisati yasvika pazvibvumirano zvakakodzera kuti Apple Watch Series 3 igone kushanda yakazvimirira paiyo iPhone. Asi, tichiisa uyu musoro padivi, ngatitarise pane izvo ziviso zvawakagadzirira.
Yekutanga yemavhidhiyo inotiratidza kuti mushandisi sei unogamuchira runhare kuburikidza neako Apple Watch Series 3 apo chando. Mune mamwe mazwi, haufanire kutakura nhare yako kuti ukwanise kutaura neako vauri kutaurirana navo uchitamba mitambo.
Wechipiri wavo anotisheedza isu kunodzidziswa nhabvu. Mune ino kesi, mukana wekutaurirana nevako vaunoda unosimbiswazve, asi kuburikidza nemeseji. Yakazara rusununguko rwekushandisa nhare mbozha pasina kuve nenhare mbozhanhare mune chero kesi.
Chechitatu inotitora kuenda kumusangano wekudzidzisa. Mune ino kesi Apple Watch Series 3 inogovera kuonekera neAirPods. Vhidhiyo iyi inosimbisa mukana wekutarisa kurovedza muviri kwako uchiteerera mimhanzi yako yaunofarira.
Uye pakupedzisira, imwe mukana mu iko kushandiswa kweApple Watch Series 3 kugona kuishandisa isu tichidzidzira kushambira. Mune ino kesi, iyo haizoshandira sedhibha kaunda yatinoita. Uye ndiko kuti kuchengetedza kutonga kwechiitwa hakuchakwanise chete mune yakaoma mamiriro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch Series 3 zvakare ine zviziviso zvayo zveKisimusi
Kana iwe uri "mubiki" iyo nyowani Recipe Yekuchengeta application inogona kufarira iwe